SADDEX DIBI IYO LIBAAX - iftineducation.com
SADDEX DIBI IYO LIBAAX
aadan21 / December 13, 2011
Waa baa meel waxaa wada joogay saddex dibi iyo libaax. Saddexda dibi mid waa caddaa, midna waa guduudnaa, midna waa madoobaa. Dibidu aad bay u xoog badnaayeen, geeso fiiqan oo sida waranka wax u mudana way ku yaaleen. Iyagu waxay heshiis ku ahaayeen inay isu hiiliyaan haddii cadow uu ku yimaado.
Ayaantii danbe, ayaa libaaxii gaajooday kuna dhici kari waayey inuu mid ka cuno dibida. Libaaxii aad buu u fikirey. Wuxuu goostay inuu dhagro dibida si uu u gaajo beelo. Libaaxii wuxuu yimid dibigii madoobaa iyo kii guduudnaa, wuxuu ku yiri: “ Ma og tihiin dibiga caddi, inuu idin ka faanay oo igu yiri, anigu labadaas dibi la joogistoodu waa I dhibeysaa, maxa yeelay, anigu waa ka qurxoon ahay.
Labadii dibi waa ka caroodeen saxiibkoodii caddaa. Markaas baa libaaxii u soo jeediyay labada dibi talo, wuxuuna ku yiri: :Indinku berry ha la daaqina dibigaas oo ka fogaada, anigana waxaan dhageysan doona, bal hadba quxuu idin ka sheego”.
Waa barigii ayaa labadii dibi aayar ay ka fogaadeen meeshii u daaqayey dibigii caddaa.
Dabadeed libaaxii baa hawl yari ku helay dibigii caddaa kolkaasuu ku booday oo diley, cunayna.
Barqadii ayaa libaaxii u yimid labadii dibi, wuxuuna ku yiri: “i dhageysta, dibigii caddaa waa tagey, wuxuuna iisheegay dibi kale oo midibkiisa leh, maxaa yeelay, wuxuu yiri, “ Anigu dibidaas foolxumada badan le lama joogi karo”.
Dhowr maalmood ka dib, ayaa libaaxii gaajooday, wuxuuna jecleystey inuu cuno labada dibi midkood, ilowse wuxuu arkay inuu labadooda oo wada jira uunan la dagaalami Karin. Markaas buu u yimid dibigii madoobaa, wuxuu ku yiri: “ Adigi war ma qabtid, ma og tahay, inuu dibigii guduudnaa uu kaa faanay uu yiri majecli inuu I feer daaqo dibiga madow, maxa yeelay, madowgiisa ayaa nacay”. Markaasaa libaaxii u sheegay si uu u rumeysto wuxuu yiri, “ Bal xoogaa berry ka fogow, waxaad ogaan doontaa wuxuu falo e”. waagii markii uu baryey ayaa dibigii madoobaa taladii libaax yeelay oo ka dheeraaday dibigii guduudnaa. Markaas ayaa libaaxii intuu soo gaatamay, ku boodey dibigii guduudnaa. Markaasuu markiiba diley. Maalmo ka dib ayaa libaaxii u yimid dibigii madoobaa oona ku jeesjeesay, wuxuuna ku yiri, “ Ma og tahay inaan manta qado kaa dhiganayo”. Markaasuu dibigii madoobaa gartay in libaaxu saaxibbadiis diley.
Dibigii quxuu ku jawaabay, “ Anigu ayaantii aad dishey dibigii caddaa baan dhintay, nolosha hadda aan noolahayna waa mid dhalanteed ah”. Libaaxii intuu ka carooday, ayuu ku soo boodey oo diley.
Wadajirku waa xoog, kala tagguna waa tabar darro. Iskaashiga, wadajirka waxa weeye horukac.
Sheekadaan maxay murti leedahay?
Maahmaah soomaaliyeed baa oraneysa “ Ilko wada jir bay wax ku gooyaan!”
Taariikh Faneedka Fanaanka Da’da Yar ee “Abdi Hollan”.. Akhriso.
Iska key Illow (Qiso Jaceyl oo xiiso badan) Qeybtii 4-aad